RSSD and DOA/DAR Seed Farms sign agreement for facility upgrading with grant from the project
အဆောက်အအုံများ အဆင့်မြှင့်တင်ရန်အတွက် စီမံကိန်းမှ ပေးအပ်မည့်ရံပုံငွေအတွက် RSSDနှင့် DOA/DAR မျိုးသန့်ခြံတို့ သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်း
Government seed farms are facing challenges in providing certified seed (CS) producers in the region with sufficient quantity and quality of Early Generation Seed (EGS), i.e. Foundation Seed (FS) and Registered Seed (RS). The RSSD project component 1 aims to contribute to improving the capacity, infrastructure and management of the seed farms operating in the Ayeyarwady Delta. The project is working on four intervention areas:
(i) establishment and operationalization of an EGS demand forecasting system;
(ii) development of business management capacity of seed farms staff;
(iii) development of seed farm investment plans;
(iv) operationalization ofaseed farm investment fund.
အစိုးရ မျိုးသန့်ခြံများသည် ဒေသတွင်း စီးပွားဖြစ်မျိုးစေ့(CS) ထုတ်တောင်သူများအား အရည်အသွေးပြည့်သော အခြေခံမျိုးသန့်မျိုးစေ့များ(EGS)ဖြစ်သည့် ဆင့်ပွားမျိုးစေ့(FS)နှင့် မျိုးသန့်မျိုးပွားမျိုးစေ့(RS) တို့ကို အရည်အတွက်လုံလောက်စွာ ပံ့ပိုးပေးနိုင်ရန်အတွက် အခက်အခဲကြုံတွေ့နေရသည်။ RSSD စီမံကိန်းအပိုင်း (၁)သည် ဧရာဝတီမြစ်ဝကျွန်းပေါ်အတွင်း လုပ်ငန်းလုပ်ဆောင်နေသည့် မျိုးသန့်ခြံများ၏ စွမ်းဆောင်ရည်၊ အခြေခံ အဆောက်အအုံနှင့် စီမံခန့်ခွဲမှုတို့ တိုးတက်လာစေရန်အတွက် ထောက်ပံ့ပေးဖို့ရန် ရည်ရွယ်သည်။ စီမံကိန်းတွင် အပိုင်း (၄)ပိုင်းပါဝင်သည်။ (က) EGS ဝယ်လိုအားကြိုတင်ခန့်မှန်းမှု စနစ်ကို ဖန်တီးခြင်းနှင့် အသုံးပြုနိုင်ရန်လုပ်ဆောင်ခြင်း၊ (ခ) မျိုးသန့်ခြံဝန်ထမ်းများ၏ စီးပွားရေး စီမံခန့်ခွဲမှုစွမ်းရည်ကို မြှင့်တင်ပေးခြင်း၊ (ဂ) မျိုးသန့်ခြံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု အစီအမံများ တိုးတက်လာစေခြင်း၊ နှင့် (ဃ) မျိုးသန့်ခြံ ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ရံပုံငွေနှင့် လုပ်ငန်းလည်ပတ်စေခြင်း တို့ဖြစ်သည်။
Myanug Mya Research Farm (DAR)
This component project is working with4government seed farms: Myaung Mya Research Farm, Thayaung Chaung Seed Farm, Shwe Laung Seed Farm and Aukkwingyi Seed Farm. Whereas Myaung Mya Research Farm is part of the Department of Agricultural Research (DAR), the other three farms fall under the Department of Agriculture (DAO). The RSSD project is working with the DOA Seed Division in Nay Pyi Taw to ensure that interventions are aligned with the government strategy.
On 21st January 2019, the4seed farms and RSSD signed the agreement on receivng the grants (US$ 225,000) and working on the infrastructure development of the individual farms.
စီမံကိန်းသည် အစိုးရ မျိုးသန့်ခြံများဖြစ်သော မြောင်းမြသုတေသနခြံ၊ သရောင်းချောင်း၊ ရွှေလောင်း၊ တံခွန်တိုင်၊ နှင့် အောက်ကွင်းကြီးမျိုးသန့်ခြံတို့နှင့် လက်တွဲလုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။ မြောင်းမြသုတေသနခြံသည် စိုက်ပျိုးရေးသုတေသနဦးစီးဌာန(DAR) ၏ ခြံဖြစ်ပြီး ကျန်ရှိသောခြံလေးခြံမှာ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၏ခြံများဖြစ်သည်။ RSSD စီမံကိန်း၏ လုပ်ဆောင်မည့်လုပ်ငန်းများသည် အစိုးရ၏မဟာဗျူဟာနှင့် ကိုက်ညီမှုရှိစေရန်အတွက် နေပြည်တော်ရှိ စိုက်ပျိုးရေးဦးစီးဌာန၊ မျိုးစပါးဌာနခွဲနှင့်အတူ လုပ်ဆောင်မည်ဖြစ်သည်။
မျိုးသန့်ခြံတခြံစီ၏ အခြေခံအဆောက်အဦများအတွက် အမေရိကန်ဒေါ်လာ ၂၂၅,၀၀၀ ထောက်ပံ့ငွေ ပေးအပ်ခြင်းအတွက် သဘောတူလက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းကို RSSDနှင့် မျိုးသန့်ခြံ ၄ ခြံတို့မှ ၂၀၁၉ ဇန်နဝါရီလ ၂၁ ရက်တွင် ပြုလုပ်ခဲ့ကြသည်။
The attendees for the Signing Ceremony with Members from the RSSD and the Government Seed farms
Broad Objectives of this event
ဤအခမ်းအနား၏ ပိုမိုကြီးမားကျယ်ပြန့်သည့် ရည်ရွယ်ချက်များ
To explain the objectives of seed farm investment funds and the process
To establish and operationalize an investment fund for seed production and processing infrastructure
To understand the documentation process
To understand clearly the duties and responsibilities of Fund Management Committee and Steering Committee
The RSSD project Head and the Regional Director (DOA) reiterated the benefits of this collaboration and urged the team to work with unison to achieve the targets.
-မျိုးသန့်ခြံရင်းနှီးမြုပ်နှံမှု ရံပုံငွေများနှင့် ဖြစ်စဉ်များ၏ ရည်ရွယ်ချက်များအား ရှင်းပြရန်
-မျိုးစေ့ထုတ်လုပ်ခြင်းနှင့် မျိုးစေ့သန့်စင်ခြင်းလုပ်ငန်းများအတွက် ရင်းနှီးမြုပ်နှံမှုရံပုံငွေ ထူထောင်ရန်နှင့် လည်ပတ်နိုင်ရန်
- စာရွက်စာတမ်းပြုစုသည့် လုပ်ငန်းစဉ်ကို နားလည်သဘောပေါက်ရန်
- ရံပုံငွေစီမံခန့်ခွဲမှုကော်မတီနှင့် ဦးဆောင်ကော်မတီတို့၏ လုပ်ငန်းတာဝန်များအား ရှင်းလင်းစွာ သဘော ပေါက်နားလည်ရန်
RSSD စီမံကိန်းဦးစီးနှင့် DOA တိုင်းညွှန်ကြားရေးမှူးတို့မှ ယခုကဲ့သို့ ပူးပေါင်းလုပ်ဆောင်ရခြင်း၏ အကျိုးကျေးဇူး များအား ထပ်လောင်းပြောကြားခဲ့ပြီး ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်ရောက်ရှိဖို့ အတူလက်တွဲလုပ်ဆောင်သွားရန် အဖွဲ့များအား တိုက်တွန်းခဲ့ကြသည်။
HOP Andreas Graf (Second from Left) sugning the agreement with Thaiyung Chaung seed farm (Farm manager on extreme Right)